Intengo yemali yeDividenti ihlala iitshati, idijithali yorhwebo ekuthengeni
Izinga lokutshintshiselwa kwemali ye-Digital kwi-intanethi, ukuguqulwa kuyo nayiphi na imali.
Iimali ze-Crypto zemali zangoku, ixabiso lokutshintshwa kwemali yedijithali kwi-intanethi 21 EyoMsintsi 2020
Litecoin itshati ephilayo ekhoyo
Ethereum Classic itshati ephilayo ekhoyo
Amaxabiso e-Cryptocur lwemali kwiwebhusayithi abonisa umyinge wakhe kwangoko nayiphi na i-imali yedatha yanamhlanje ngexesha lokwenyani. Amaxabiso e-Imali yedatha abalwa njengomndilili wazo zonke izinto zotshintshiselwano namhlanje. Unokulandela i-dynamics yexabiso le-elektroniki kwi-intanethi kwaye ufumane elona thuba lokutshintsha kunye nokuthengisa.
Iqondo lokutshintshiselana nge-cryptocur lwemali kwiwebhusayithi yethu lihlaziywa kwi-intanethi rhoqo ngemizuzwana engama-30. Funda i-crypto exchange rate mahala, ngexesha lokwenyani, ngoku.
Imali ye-Crypto ithengiswa kwiimarike ezahlukeneyo ze-crypto kunye ne-crypto-exchanges. Ngokungafaniyo nemali yodidi, akukho mntu useta ireyithi ye-crypto yanamhlanje okanye ngomso. Kutshintshiselwano ngalunye lwe-imali yedatha, iqondo lotshintshiselwano nge-imali yedatha luyatshintsha ngamaxesha ahlukeneyo. Ukuze uqonde ngokuchanekileyo umyinge we-imali yedatha, ngoku kufuneka ubale kwangoko ixabiso eliphakathi lereyithi yotshintshiselwano kuzo zonke iimakethi ze-crypto.
Iwebhusayithi ye-sptptoratesxe.com inika ingqalelo, kunye nemowudi ye-intanethi, umndilili wamanani amaxabiso e-imali yedatha kuzo zonke iimakethi ze-crypto.
Iidreyikhi zamanani amaxabiso e-imali yedatha ahlala egadwe rhoqo nge crypto kuzo zonke iimalike ze-crypto emhlabeni.
Unokulandela umkhondo wamandla esantya sokutshintshiselana kwesinye isihlobo se-imali yedatha kwesinye usebenzisa iiwijethi zobuqu. Ireyithi ye-crypto ibonakaliswa ngohlobo lweegrafu kunye namanani, i.e. iinguqu zenqanaba lokubonisa ziboniswa kumhlaba owahlukileyo njengepesenti. Ukunyuka kwenqanaba kunye nokuhla kwemali kuboniswa ngemibala eyahlukeneyo.
Jonga elona zinga liphezulu le-imali yedatha kwi-intanethi.
Elona zinga liphezulu lemali ye-imali yedatha, amandla okukhula kunye nokuhla kwezinga le-imali yedatha inokulandelelwa ngeegrafu zotshintsho olwenzeka kwangoko kwinqanaba le-imali yedatha kwiwijethi zewebhusayithi okanye kumaphepha esantya sokutshintsha kwe-imali yedatha ekhethiweyo kwi-intanethi. Enye yeendlela zokulandela umkhondo olungileyo kukujonga rhoqo utshintsho kumanani we-imali yedatha ekhethiweyo kwi-intanethi kwaye xa itshathi ye-imali yedatha ibonisa ixabiso elincinci, eli lelona xesha lilungileyo lokuthenga, kwaye xa ubuninzi - ukuthengisa i-crypto .
Izinto eziguquliweyo ze Bitcoin namhlanje 21 EyoMsintsi 2020 kwi-intanethi
Izinto eziguquliweyo ze Bitcoin namhlanje lolona lwazi luphambili kwi-Intanethi olusetyenziswa ngabantu abaninzi. Ungalufumana uguqulelo lwe Bitcoin lanamhlanje kuyo nayiphi na imali ye-imali yedatha nakweyiphi na imali yehlabathi kwiwebhusayithi yethu kwi-Intanethi.
Sibonisa amandla okutshintsha kwenqanaba lotshintshiselwano kuzo zonke ii-imali yedatha mihla le kwaye siyayazi umyinge hhayi namhlanje, kodwa nembali yamandla esantya esenzeka mihla le.
Izinto eziguquliweyo ze Ethereum namhlanje 21 EyoMsintsi 2020 kwi-intanethi
Izinto eziguquliweyo ze Ethereum namhlanje - umndilili ophakathi Ethereum ngoku zonke izinto zentengiso kwimarike yemali yehlabathi, eboniswa kwangoko kwiwebhusayithi yethu. Izinto eziguquliweyo ze Ethereum kwiDola limisela Ethereum kwezinye iimali kunye nee-cryptocurrensets.
Izinto eziguquliweyo ze Litecoin namhlanje 21 EyoMsintsi 2020 kwi-intanethi
Izinto eziguquliweyo ze Litecoin kwi-intanethi namhlanje - umndilili ophakathi Litecoin ngoku kukutshintshiselana nge-crypto, eboniswa ngokukhawuleza i.e. kwi-intanethi kwisayithi.
Izinto eziguquliweyo ze Litecoin kwiDola nako kumisela amandla e- Litecoin kwezinye iimali kunye nee-cryptocurrensets.
Izinto eziguquliweyo ze XRP namhlanje 21 EyoMsintsi 2020 kwi-intanethi
Izinto eziguquliweyo ze XRP namhlanje kwi-intanethi - umndilili XRP ngoku kukurhwebo lwe-crypto. Ukulandelela inqanaba lotshintshiselwano kabini ngomzuzu kukuvumela ukuba ubonise amandla enyaniso enqanaba le-crypto.
Izinto eziguquliweyo ze XRP kwiDola nako kumisela amandla e- XRP kuzo zonke ezinye izinto zehlabathi.